May 2016 - iftineducation.com
iftineducation.com – Ilo gaagaaban oo ku sugan khabiirinta ku xeel dheer dhanka ciyaarta sariirta ayaa sheegay in ilaa iyo afar arimo aysan raggu badan kood ka helin xilliga sariirta arrimahaa aya u arkaan in ay qalad ku yihiin in haweeneydu ku kacdo xilligaa afarta xilli ayaa ka mid ah1 1. In haweeneydu iyado ku hor marto rabitaanka ninkeeda xilliga sariirta ama…
iftineducation.com – Waxaa suurta gal ah in haweeneydu jirkeeda dhan ay ka kacsato, hase ahaate waxaa sii jira haween meelo gaar ah ka kacsada, marka ragoodu u tagayaan. Haweenka inta badan waxay ka kacsadaan, Carabka, Dhuunta, Calaacasha (Lugaha iyo gacmahaba), Dhagaha iyo xudunta, waxaa jira haween sidaa ka duwan. Haweenkaas waxay kacsadaan marka ay galmo ama falgal ay sameynayaan uun, iyadoo…
iftineducation.com – Mar Hadii aad tahay qof guursan raba ama ama guursaday oo uu culeys dhanka bigro jabaninta ah kaa heysato gabadha aad qabto hada waxaa lagu hayaa talo muhiim taas wax badan ka badali donta in aad si dhaqso ah aad arintaas u sameyso. Lakiin markaad warbixntaan aqrinee waxaa lagaa rabaa in aysan wax badan aad iska fiiriso oo aadan…
iftineducation.com – Golaha Wasiirada dalka Turkiga ayaa meel mariyay lacag deeq ah oo bil waliba la siinaayo Dowladda Federalka Somaliya, kadib markii lacagtaan la horgeeyay Golaha Xukuumadda dalkaasi. Sida ay qortay Wakaalada Wararka Anadolu ee dalka Turkiga Golaha Xukuumadda ayaa la horkeenay dhaqaalahan waxaana ay isku raaceen in la meel mariyo. Bil kasta Dowladda Federalka Somaliya ayaa waxaa la siinayaa $2…
iftineducation.com – Dawladda Shiinaha ayaa hor joogsatay qaraar QM ay ku doonayso in lagu joojiyo nooc ka mid ah rinjiga guryaha la mariyo oo ay Shiinuhu u dhoofiyaan Africa kaasi oo halis caafimaad ku keeni kara dadka gaar ahaan maskaxda caruurta. Qaraarkaasi oo ay ka wadaxaajoonayaan xubnaha deegaanka u qaabilsan QM ayaa haatan gabo gabo ku dhow, waxaana soo dhaweeyay waddamo…
iftineducation.com – Shaqaalaha tareenada ee dalka Faransiiska ayaa shaqada joojinaya iyada oo ururada ay ku midaysan yihiin ay sii wadaan mudaaharaadka ay uga soo hor jeedaan isbadalada la qorshaynayo in lagu sameeyo shaqaalaha. Arrintan ayaa la filayaa in ay ku sii kordhiso culays gaadiidka oo horayba ula sii daalaa dhacayay shidaal yari. Madaxwaynaha dalka Faransiiska Francois Hollande ayaa sheegay in uusan…
Hindiya oo la kulantay qaraabada nin Afrikaan ah oo la dilay
iftineducation.com – Saraakiil Hindiyaan ah ayaa la kulmay qaraabada nin Congo u dhashay oo la dilay, kaddib markii ay magaalada Delhi tageen maanta oo Isniin ah. Masonda Ketada Olivier ayaa jidh dil lagu dilay kaddib markii ay murmeen saddex nin oo Hindi ah horaantii bishan. Qaar ka mid ah ururada ardayda Afrikaanka ah iyo Dublamaasiyiin ayaa mudaaharaadyo dhigay, iyaga oo sheegay…
Cameron oo amaanay Duqa magaalada London
iftineducation.com – Rai’sal wasaaraha Britain, David Cameron ayaa duqa magaalada London, Sadiq Khan ku amaaanay in uu yahay nin ay aad ula wayn yihiin Muslim nimadiisa iyo Biritish nimadiisa. Waxay si wada jir ah u ambaqaadayaan in Britain ay noqoto mid xoog ku leh dalalka Yurub dhexdooda marka laga gudbo in hogaamiyaha Labour-ka Jeremy Corbyn uu diiday in uu u ol’oleeyo…
iftineducation.com – Haweenayda Ayaa dhabar keda iyo bood yaheeda Saaraysa Iyadoo Gadi Cad jiifta ama dhabar dhabar, Iyadoona saran yihiin Qarka Sariirta, halka ay lugeheeda ay saran yihiin garbihiisa labada barina ay si Tartiib ah ay xaga hore ee ninka ugu aadan yihiin, kadibna uu ninka malab kiisa asagoo istaagsan DHAX DHIGAAYO , Tani Waxay sahleysaa in uu ukiciyo xubintan…
iftineducation.com – Dareenka naasaha haweenka, Raaxada dadka way ku kala duwan yihiin rag iyo dumarba marka aan ka hadalno dareenka naaska dumarka waa noocyo badan naago waxaa jira marka naaska laga taabto aad raaxo u dareema jirkooda oo dhan jiriiirico ka soo yaacda xaadadooda istaagta markaas kacsigooda wuxuu gaarayaa heer sare xataa waxaa laga yaabaa gabadha xiligan siilkeeda inuu soo buurto…